UNikolaj Coster-Waldau uxwayisa ngomphumela wokuguquka kwesimo sezulu eGreenland | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UNikolaj Coster-Waldau, ngesinye isikhathi kuvidiyo.
Umlingisi uNikolaj Coster-Waldau, odlala indawo kaJaime Lannister ochungechungeni oludumile lwe "Game of Thrones", ungumuntu ozinikele kwizimbangela zemvelo. Kangangokuthi Waqokwa njengeNxusa le-Goodwill yi-UN, futhi wabamba iqhaza emkhankasweni owawumyisa eGreenland, indawo ekhethwe yi-Street View ukuqopha izithombe ezingama-360º ukukhombisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Lapho, usebenze nabo ekuqopheni nakwividiyo esikukhombisa yona ngezansi.
UCoster-Waldau ongowokuzalwa eDenmark uzizwa esondelene kakhulu neGreenland: umkakhe, umlingisi nomculi uNukâka Motzfedt, wazalelwa edolobhaneni lase-Uummannaq, elisenyakatho-ntshonalanga yezwekazi. Kule ngxenye yomhlaba, imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu iyamangalisa. Naye uqobo wabhala ku isihloko ishicilelwe kubhulogi esemthethweni yeGoogle Spain:
IGreenland, indawo engiyibheka njengekhaya lami lesibili lomndeni, ishintsha ngokushesha okukhulu kunanoma iyiphi enye ingxenye yomhlaba; Eqinisweni, imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu kule ngxenye yomhlaba kulula ukuyibona: njengoba iqhwa liyancibilika futhi izinguzunga zeqhwa zidilika, izindawo ezazimbozwe yiqhwa ngaphambili ziguqulwa zibe izindawo eziwugwadule.
Ekupheleni konyaka odlule ithimba leGoogle Maps livakashele lo mlingisi futhi lammema ukuthi azoqoqa izithombe zeStreet View, into ezokhombisa abantu okwenzekayo ezwenikazi, ngoba izibalo nemibiko yesayensi esicabanga ukuthi izincwadi kuphela futhi azikho izehlakalo zangempela. Ngale ndlela, noma ngubani ofuna ukubona ngamehlo akhe ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kunamiphi imiphumela eGreenland.
Njengoba uCosler-Waldau ngokwakhe asho: sinesibopho sokuvikela le planethi. Uma singathathi lo msebenzi, imiphumela ingaba mibi kakhulu.
Ungabona izithombe ezingama-360º ngokwenza chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-VIDEO: UNikolaj Coster-Waldau, oqhamuka 'Game of Thrones' uxwayisa ngomphumela wokuguquka kwesimo sezulu eGreenland